Chen lu si radieshon na-àmà vest nwere ezigbo otu-kwadoro echebe arụmọrụ - China Shandong Chen lu
Chen lu si radieshon na-àmà vest nwere ezigbo otu-kwadoro echebe arụmọrụ
HA05 ụzọ vest (otu kwadoro) 1. ebute Ẹkot: 0,35 MMPB, 0.5mmpb; Ma ọ bụ ndị ọzọ na-echebe Ẹkot. 2. Style: dịghị uwe njikọ 3, ọrụ: ọ bụ-eji maka nchebe nke X ray, onye ọrụ nwere ike dị ka mkpa si na-bụ-eji maka radieshon nchedo (X, gamma ụzarị, nchebe), onye ọrụ nwere ike ịhọrọ dị ka mkpa nchedo usoro ngwaahịa dị iche iche nkọwa (0,5 MMPB gamma ụzarị nchedo n'ozuzu họrọ). 3. Reference maka echebe uwe size: S dịghị. : 900 (ogologo) ...
Ebute Ẹkot: 0.35mmpb
ọrụ: radieshon nchedo
E ji mara ọrụ: With ezi mma maka otu afọ
HA05 ụzọ vest (otu kwadoro)
1. ebute Ẹkot: 0,35 MMPB, 0.5mmpb; Ma ọ bụ ndị ọzọ na-echebe Ẹkot.
2. Style: dịghị uwe njikọ
3, ọrụ: ọ bụ-eji maka nchebe nke X ray, onye ọrụ nwere ike dị ka mkpa si na-bụ-eji maka radieshon nchedo (X, gamma ụzarị, nchebe), onye ọrụ nwere ike ịhọrọ dị ka mkpa nchedo usoro ngwaahịa dị iche iche nkọwa (0,5 MMPB gamma ụzarị nchedo n'ozuzu họrọ).
3. Reference maka echebe uwe size:
S dịghị. : 900 (ogologo) * 600mm (obosara)
M dịghị. : 1000 (ogologo) * 600mm (obosara)
L dịghị. : 1100 (ogologo) * 600mm (obosara)
4. Agba: 12 na agba ịhọrọ site na
5. Ihe nkọwa:
Ọ na-mere si eke roba na-acha odo odo danpowder site nhazi na outsourcing ákwà. The ime bụ a multi-oyi akwa ọhụrụ na-echebe ihe onwunwe, na-edu ndú nkesa bụ ọbụna, nchedo arụmọrụ dị mma, na ìhè na juu, dịghị mfe mgbaji ọkpụkpụ;
Shandong Chen lu ụlọọgwụ co., LTD. Bụ a elu-tech enterprise nke bụ onwe ha nnyocha, mmepe, mmepụta na-arụ ọrụ.
Mmadụ nchedo isi ngwaahịa: X-ray echebe uwe ụzọ uwe, X-ray echebe uwe, na-edu iko, edu ndú ịchafụ, edu ndú okpu, ụzọ uwe, na-edu uwe, gonadal nchedo, ara nchedo, n'aka ya nche, ogwe aka nchedo, wdg
Main ngwaahịa nke nchedo: mobile ụzọ ihuenyo, kwụsịtụrụ ụzọ ihuenyo, bed ákwà mgbochi, mobile ụzọ ákwà mgbochi ahụ, ụzọ iko na metụtara inyeaka na-enye.
Previous: Chen lu ọhụrụ ọkara uwe otu kwadoro mgbochi radieshon ụzọ jel uwe
Osote: The ọhụrụ ụdị ụzọ na-echebe n'ọbọ enweghị uwe
ahaziri X-Ray Protection ebute Vest
Hot Sale nchedo ebute Vest
Duru uwe Vest
Duru Vest na uwe
Duru akwa nchekwa
Medical ebute Vest
Medical Single ebute Vest
New Type Duru Vest
New Type Duru akwa nchekwa
Protection ebute Vest
Protection x-ray ụzọ vest
na-echebe ụzọ vest
radieshon Duru Vest Ma Ski RT
Radieshon echebe ebute Vest
Radieshon na-àmà-edu ndú vest
Ray Duru Vest
Ray Protection ebute Vest
Single ebute Vest
Soft ebute Vest
Soft ebute akwa nchekwa
Super Soft ebute Vest
Super Soft ebute akwa nchekwa
X Ray echebe ebute Vest
X Ray echebe ebute Vest na uwe
X-Ray Duru Vest
X-Ray Protecitve Duru Vest
X-Ray Protection ebute Vest
X-Ray echebe Vest Women
The ọhụrụ ụdị ụzọ na-echebe n'ọbọ nwere dịghị s ...